Mbido AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Ademola Lookman Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Anyị Ademola Lookman Biography na-agwa gị Eziokwu gbasara Akụkọ nwata ya, Ndụ mbido, Ndị nne na nna, Ezinụlọ, Enyi nwanyị / Nwunye ka ọ bụrụ, Ndụ, Ndụ Nke Onwe na Net Worth.
Na nkenke, anyị nwere akụkọ dị mkpirikpi banyere onye na-asụ Bekee nke Wandsworth. Lifebogger malitere akụkọ Lookman site n'oge ọ bụ nwata ruo mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama na egwuregwu mara mma nke football.
Iji mee ka agụụ nke autobiography gị sie ike na ọdịdị Ademola Lookman's Bio, lee gallery nke ọrụ ọrụ ya. Ọ na-akọ akụkọ ya, nri?
Ihe omuma nke Ademola Lookman.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ bụ onye okike na onye ọrụ aka dị egwu… ndị bọọlụ nwere ngọzi, aghụghọ, ngwangwa, na agility.
N'agbanyeghị otuto a, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole gụrụ otu akụkọ Ademola Lookman's Life. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Ademola Lookman Nwatakiri Akụkọ nke:
N'ihi na ndị na-ebido Biography, ọ na - aza aha - Mola. Ezigbo aha ya ma ọ bụ aha ya bụ - Ademola Lookman Olajade Alade Aylola Lookman.
A mụrụ onye na-asụ bọọlụ bekee na ụbọchị iri abụọ nke ọnwa Ọktoba 20 nne na nna Naịjirịa, n'obodo Wandsworth, London.
Dika nwatakiri, Mola lere egwuregwu vidio anya. Offọdụ ndị otu egwuregwu bọọlụ dọọrọ mmasị ya karịa Everton's Goodison Park.
Isoro ndị enyi na-agba bọọlụ tọkwara ntọala ntọala nke mmepe egwuregwu ya.
Tupu ọ dị afọ iri na ụma, nne na nna Ademola Lookman kwagara ezinụlọ - site na ebe a mụrụ ya Wandsworth na Peckham nke London.
Nwatakịrị ahụ tolitere na agbata obi siri ike weere dị ka ebe kachasị njọ ibi na London.
Ademola Lookman toro na Peckham, ụlọ nke Naira Marley.
Peckham, ebe Lookman tolitere, bụ mpaghara dị na ndịda London, n'ime Borough nke Southwark. Mpaghara a ma ama maka mpụ ndị ntorobịa na-eme ihe ike.
Obi dị m ụtọ na ndị nrịba ama, gụnyere ndị ezinụlọ ya enweghị akụkụ ọ bụla.
Ademola Lookman Ezigbo Ezinụlọ:
Nwa amaala Peckham sitere na ndị nne na nna Nigeria bụ ndị so n'ìgwè ndị London na-adọrọ mmasị.
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ndị mgbasa ozi na-akọwa Nna na Mama nke Ademola Lookman dị ka ndị nwere nlezianya, na-akpa ọchị, na ndị nwere ọgụgụ isi. Ọ Londoner si n'ezinụlọ nke dị n'etiti na ọ dịghị enwe ụkọ n'oge nwata.
Ndị nne na nna Ademola Lookman na-arụ ọrụ ụlọ ọdịnala, na-akwanyere ọdịbendị Nigeria ùgwù. Ha bụ ụdị chọrọ ka ụmụ ha bụrụ ndị ọka iwu ma ọ bụ ndị na-akwụ ụgwọ na ndị na-agba bọọlụ.
Na vidiyo dị n'okpuru ebe a, anyị chọpụtara, na nwatakịrị ahụ chọtara ụzọ iji mee ka ihe ndị nne na nna ya tụrụ anya ya - nke ihe ha chọburu ka nwa ha bụrụ na ndụ.
Ademola Lookman Ezinụlọ:
Ihe mbụ, anyị ga-agwa gị ihe aha ya pụtara. Ademola bụ aha nna ochie Yoruba Yoruba nke putara 'eze / okpueze / alaeze yana akụnụba'.
Enweghị mgbagha, ọ nwere mgbọrọgwụ ezinụlọ ya na Nigeria. Nke a bụ mba ọdịda anyanwụ Africa nke a na-ahụ anya nwere ndị ojii kachasị na mbara ụwa.
Nke a bụ maapụ Nigeria na-akọwa ezinụlọ ezinụlọ Ademola Lookman.
Ndị nne na nna Ademola Lookman si na South Western nke Nigeria.
O yikarịrị ka ha ga-esite na steeti ndị a; Lagos, Oyo, Ogun, Osun, Ekiti, ma ọ bụ Ondo. Ndị ọgba bọọlụ n’onwe ya bụ ndị agbụrụ London Black African.
Ademola Lookman Mmụta:
Dika otutu umuaka ndi London amuru site na ezi na ulo nke ndi Naijiria, iga ulo akwukwo bu ihe iwu.
Ademola mere ihe nne na nna gwara ya. Dị ka akwụkwọ akụkọ Independent si kwuo, ọ gara ụlọ akwụkwọ a, St Thomas the Apostle College na Peckham.
Ademola so na ụmụ akwụkwọ kacha amụrụ ihe nke setịpụrụ na St Thomas the Apostle College dị na Peckham.
N'oge ahụ n'ụlọ akwụkwọ, Ademola bụ nwata nwoke nwere ọgụgụ isi nke nwere ike ịrụ ọtụtụ ọrụ na agụmakwụkwọ na football.
You maara? Abilities ikike ya nwere ọgụgụ isi hụrụ ya ka o mezuru atọ A * na ise Dị ka GCSE.
Ademola Lookman Football Akụkọ:
Nwa anyị nwoke gara ụlọ akwụkwọ naanị ka o wee nwee ike ịsọpụrụ ọchịchọ ndị mụrụ ya. N'echiche n'ezie, ihe niile Ademola chọrọ ịbụ - bụụrụ ka ọ bụrụ ọkachamara n'ịgba ọsọ.
Ọchịchọ maka agụmakwụkwọ enweghị mgbe ọ bụla mebiri emebi - na mbido. Na mbu, o mere ka nwatakịrị ahụ nwee obere oge maka egwuregwu ahụ. Iji nwee ọtụtụ, Mola debara aha maka bọọlụ asọmpi Sọnde dị ka Dele Alli mere.
Eziokwu bụ, nwa afọ Peckham enweghị obi ụtọ na ndụ ọtụtụ ụmụaka nwere na agụmakwụkwọ, ebe ha malitere ịgba bọọlụ na 6.
Naanị mgbe ọ dị afọ iri na ụma, Lookman debanyere aha na Waterloo FC - otu ndị otu mpaghara raara nye nye ụmụaka ụlọ akwụkwọ na-arụsi ọrụ ike ohere egwuregwu.
Mgbe ọ dị afọ 14, ọdachi (ọnwụ nke enyi) kpaliri Ademola ịdị ukwuu. Ọ bụ oge Ademola tufuru otu onye otu ya na ya bụ Anwalu.
Ọnwụ mberede nke enyi ya siri ike ijikwa mana obi ekele, ọ kpọkọtara ndị otu ya.
Ademola nwụrụ enyi ya na klọb mbụ ya. Ihe omume ọjọọ ahụ gara iji nyere ndị otu ya aka.
N'ihi ihe mgbu ya, ndị otu Ademola, n'ihi nkwanye ugwu maka ndị nwụrụ anwụ kwere ibe ha nkwa ime ihe ọ ga-ewe iji bụrụ ọganiihu na bọọlụ.
Site n'ụbọchị ahụ, ụmụ nwoke ahụ lụrụ ọgụ ọnụ, ọ dịghị mgbe ha tufuru egwuregwu dị ka ha na-emebu. Obi dị m ụtọ na ha rụzuru ihe ịga nke ọma maka onye otu ha nwụrụ anwụ.
Mmalite Ndụ na Amateur Football:
Ihe dị ka Eprel 2014, Charlton Athletic Under-16s na-abịa na njedebe nke ihe dị ka oge dị mma.
N'ihi ezumike dị ogologo n'etiti ihe ndozi ha, ụlọ ọrụ ahụ kpebiri ịhazi egwuregwu ole na ole (enyi) iji nye ndị egwuregwu ha oge.
Chalton nabatara U-16 nke London ka m soro ya sọọ mpi. Nke a bụ otu ndị agbakọtara amateur amateur chịkọtara site na mpaghara ndị otu egwuregwu Sunday.
Ha nwere obere nku nke afọ 16 aha ya bụ Ademola Lookman sonyeere Waterloo FC.
Na egwuregwu enyi na enyi ahụ, Ademola Lookman ghọrọ onye ọkpụkpọ kacha mma na olulu - site na oke. N'ịbịa dịka onye nnọchi anya mbụ, nwa anyị nwoke gosipụtara ọtụtụ obi ike. O jiri aghụghọ ya / aghụghọ ya wepụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị Chalton niile.
Ọ bụ ezie na ọ dịghị onye maara, isi ihe egwuregwu ahụ bụ maka Chalton ịchọgharị Ademola Lookman na ndị na-agba ụkwụ amaghị. Mgbe o mechara nwee mmetụta, otu n'ime ndị enyi ya gbanyeere ya izu na-asị;
Bro, echere m na ị bụ ihe kpatara egwuregwu a. Achọpụtara m na ị malitere ịchọpụta ihe ozugbo ị batara. Apụrụ m ịghọta nke ahụ. Ademola zara si …M ??… ya na enyi ya kwuru EE !!
Ademola Lookman Biography - tozọ a ma ama Akụkọ:
Mgbe egwuregwu ahụ gasịrị, nwa anyị nwetara akwụkwọ ịkpọ òkù maka ikpe ikpe ụlọ, nke ọ gafere na agba na-efe efe.
N'ihi ngosipụta dị mma nke isi ihe mgbaru ọsọ anọ, Chalton enwetaghị ya. Klọb ahụ nyere Ademola ohere ịgụ akwụkwọ.
Naanị otu afọ, onye na-eto eto dị njikere ịmalite mmalite ya maka ndị otu egwuregwu mbụ. Mgbe ha kpọrọ Ademola ka ọ kwadobe asọmpi nke izizi ya, ọ tụrụ ya n’anya nke ukwuu, chee na ọ bụ onye ọzọ onye nkuzi ahụ na-ekwu maka ya.
Mgbe ha kwusiri ike na ọ bụ ya, nwa anyị nwoke malitere ịchọ akwa mkpuchi ya na-amaghị na ọ dị n'akpa uwe ọzụzụ ya.
Onye nchịkwa Chalton gwara ya ka ọ nwee obi ike ma gosipụta onwe ya nke o mere. Obi dị m ụtọ na Lookman ghọrọ kpakpando breakout, onye bidoro dị ka nke a Wayne Rooney. N'ikwu okwu banyere ahụmahụ ya n'oge mbụ, Mola kwuru otu oge;
N'ịbụ onye na-arụsi ọrụ ike, ndị na-agba ọsọ ụkwụ na-enweghị mmasị na football agụmakwụkwọ, mana jiri ọgụgụ isi ya mee ihe megide ndị na-emegide ya, akpọrọ Ademola ka ọ nata onyinye mbụ ya.
N'ihi ihe ndị ọ rụzuru na agụmakwụkwọ na football, ọ natara 2015-2016 LFE Apprentice of the Year.
Mgbapu Bekee mbu:
N'oge a (2016), ọ joyụ nke ezinụlọ Ademola Lookman amaghi oke ka ọ nwetara ọkpụkpọ oku mba ụwa mbụ maka ndị otu England U19.
N'afọ sochirinụ (2017), Lookman jụrụ ohere ịgbanwe ịkwado Nigeria - mba nke papa ya na mama ya.
Tupu ịkpọsa aha ya na football nke Bekee, ọkwọ ụgbọala na mkpebi siri ike bụ akụ ya kacha baa uru.
Bụ onye so na kpakpando kachasị na mba ya hụrụ ya ka a họpụtara ya ịnọchite anya England n'okpuru-20 na 2017 FIFA U-20 World Cup.
Asọmpi ahụ mere ka England na-ebili. Featuring n'akụkụ Spurs ' Kyle Walker-Peters, Nke Arsenal Ainsley Maitland-Niles, na nke Everton Dominic Calvert-Lewin (ịkpọ aha ole na ole), ihe mgbaru ọsọ atọ Ademola nyeere England aka inweta iko a.
Ademola Lookman ebube oge ya na England.
Ademola Lookman Biography - Akụkọ Succes:
Ọtụtụ ohere mepere maka kpakpando na-ebili mgbe asọmpi ahụ. N'ihe na-erughị afọ atọ na Chalton, Ademola nwetara £ 11m nyefee Everton.
O juru ọtụtụ ndị anya, nke a bụ akụkọ na - adịghị ahụkebe maka ndị ọgba bọọlụ bidoro site na UGBUA (bọọlụ bọlbụ Sunday) ịga ebe ahụ - n’ime obere oge.
N'ịtụgharị uche n'oge ọ bụ nwata na Chalton Athletic na isonyere Everton, Ademola kesara ahụmahụ ya na nyochaa.
Ọ na-agwa anyị otu Toffees (n'okpuru Ronald Koman) gụrụ ya mgbe ọ bịara ile otu egwuregwu ya anya ebe ọ masịrị ya.
Ademola jikọrọ ya na ndị otu Everton ozugbo ụbọchị ọzụzụ ya. Ọ na-enwe ekele maka bọlbụ na-agba agba ma na-abịarukwu ụfọdụ ndị otu egwuregwu England nso dịka ihe ndị a Tom Davies.
Chọta onwe ya na-egwu megide ụdị nke Yaya Toure na Sergio Aguero bụ ihe Ademola siri ike ikwere.
Ee, ọ rọrọ nrọ inwe nrọ mbu nke Premier League mana ọ kwetaghị na ọ ga-abịa ọsọ ọsọ. N'ụzọ na-akpali mmasị, nwa anyị nwoke meriri n'egwuregwu mbụ ya ka ndị otu ya meriri Man City.
The RB Leipzig Akụkọ nke:
Gbaso akpa nke Ronald Koman, Ademola chere na ọ chọrọ ahụmịhe si mba ọzọ. Ọ jụrụ mkpebi Allardyce na ịgbazinye ya Derby, kama ịhọrọ ịkwaga Ralph Hasenhüttl's RB Leipzig.
Mgbe ọ gbasịrị mgbazinye ego na uwe ndị German ebe o meriri onye mmeri mbụ (dịka anyị nwere na vidiyo dị n'okpuru), Ademola ghọrọ ọkacha mmasị ndị Leipzig. Klọb ahụ na-asọpụrụ ọrụ ya banyere ya na-adịgide adịgide.
Mgbe ntiwapụ nke COVID, onye obodo London chere na ọ dị mkpa ka ọ nọrọ ezinụlọ ya nso.
N'ihi ya na 30th nke Septemba 2020, Ademola sonyeere Fulham na Premier League, ụlọ ọgbakọ nke dabara n'ụdị ya ma dị nso na ebe ọ tolitere.
Kemgbe ọ banyere n'akụkụ London, Ademola eleghaghị anya n'azụ. O gosipụtawo mmụba dị egwu, omume siri ike karị, na ntụkwasị obi siri ike.
Omume a, kwa izu n'izu, na-enye Fulham ihe ntụtụ nke obi ike na ọchịchọ ha iji weghachite oge.
Obi abụọ adịghị ya, ndị na-agba bọọlụ bekee na-achọ ịmụrụ nwatakịrị ọzọ na-akpọ ihe ijuanya Gareth SouthgateEngland.
Zọ ọbụla ọ dị, anyị na-achọ ya mma. Ndị ọzọ, dị ka anyị na-ekwu banyere Bio ya, ga-abụ akụkọ ihe mere eme.
Ademola Lookman Hụrụ Ndụ - Nwanyị, Nwunye, Nwa?
Site na nnukwu akụkọ ọma, dị ka achọpụtara n'ụzọ ọ mere aha maka Premier League, otu ihe ka ga-ejide n'aka maka nwa afọ Peckham.
Dịka eziokwu, ọtụtụ ndị fans na-eche ma Ademola Lookman nwere enyi nwanyị ma ọ bụ onye ọ na-ewere dị ka nwunye.
Ọnye na-bụ Ademola Lookman Dating?
Ewezuga nne ya na nwanne ya nwanyị nke Nigeria, onye a na-asọpụrụ Fulham dribbler enweghị onye ọ bụla na-eme ka Biography zuru ezu.
Na echiche ọzọ, Ademola nwere ike ịnwe enyi nwanyị mana ọ jụrụ ịme mmekọrịta ya n'ihu ọha, opekata mpe ugbu a.
Ademola Lookman Ndụ Nke Onwe:
Ademola Lookman bụ mmadụ dị jụụ ma nwee ezi uche, onye nwere akara nke Libra Zodiac Sign. Ọ nwere ọdịdị ịmata ihe na okike okike ma na-apụ na pitch.
Ọzọkwa, ọchịchọ ebumpụta ụwa ya inyere ndị mmadụ aka n'atụghị anya inweta ihe ọ bụla, na-ekwu ọtụtụ ihe banyere onye ọ bụ.
N'ịtụle na ọ bụ nwa akwụkwọ kacha amụrụ ihe na ntọala ya na St Thomas the Apostle College na Peckham, ọ tụghị anyị n'anya ịhụ Lookman na-agbaso otu n'ime agụụ mmekọahụ ya.
Ọ bụghị ndị ọzọ karịa ụmụ klas nkuzi. Ademola nwere mmasị ịkwado ụmụaka, anyị wee chọpụta n'oge ya na Everton.
Ọ bụrụ na Football arụghị ọrụ, anyị ji n'aka na Ademola Lookman gaara abụ onye nkuzi.
Pmụ akwụkwọ nke St Andrew's Maghull C Of E Primary School na Liverpool agaghị adị ọsọ ọsọ ichefu onye nkuzi ha dị umeala n'obi, bụ onye n'agbanyeghị na ọ na-arụsi ọrụ ike oge, na-achọta oge iji bịa leta ha ma duzie ha.
Ewezuga football, Ademola Lookman nwekwara oke ọchị.
Na vidio a, a hụrụ nwa anyị nwoke ya na nwanne ya nwoke bụ onye Naijiria, Egwuregwu Tomori, na-egwuri egwu banyere ndị otu ha na-achịkọkwa ọchị ọnụ.
Ademola Lookman Web site Web:
N’amaghị onye ọ bụ, ịchọpụta Ademola Lookman n’okporo ámá ga-eme ka ị chee na ọ bụ naanị onye London - na-ekpe ikpe site n’otú o si eji ejiji.
Nke a bụ akara nke ịdị umeala n'obi ya. Eziokwu bụ, Ademola nwere ọgụgụ isi dị oke egwu n'agbanyeghị nde kwuru nde na-aba n'ụlọ akụ ya kwa afọ.
Hụ onye na-enweta nde pound 2.6 kwa afọ. Ademola bụ ihe atụ kachasị mma nke omume mgbochi flash.
Ndị na - agba ọsọ bọọlụ kpughere site na Instagram ya ka ụlọ ya si dị. Adlọ Ademola Lookman bụ ihe akaebe na ọ bụ ezigbo ọgwụ maka ndụ dị oke ọnụ.
Ndị na - agba ọsọ sitere na Naịjirịa na - ebi ndụ dị nwayọ na ihe dịka obere ụlọ - agbanyeghị na ha na Fulham na-eme 50,000 pound kwa izu.
Nke a bụ ụlọ Ademola Lookman. Maka onye na-akpata 50k pound kwa izu.
Emogbọ Ademola Lookman:
Ka m na-ede Bio a, Mola nọ n'ọkwa na ndụ ebe ọ na-aga agbamakwụkwọ dị ka onye na-alụ nwanyị ọhụrụ.
You mara ma nke ahụ bụ ụgbọ ala Ademola Lookman dị n'okpuru? ee, onye ahụ n'azụ… flashy Mercedes Benz. Dị ka anyị si, na-agba ịnyịnya nwere ike ịbụ ya, i ji maka ihe omume.
Ademola Lookman Ndụ Ezinụlọ:
England Superstar anaghị echefu ndị kwadoro ya mgbe ọ na-enweghị ihe ọ bụ. Ndị a bụ ezinụlọ, ma ọ bụ ndị nne na nna ya, ụmụnne ya ndị nwoke na ndị nwanyị.
Anyi agaghi echezo ndi nkuzi na ndi otu anyi nyeere aka mee ka oganihu. Ka m kọọrọ gị ihe ndị ọzọ banyere ezinụlọ ya.
Banyere Ademola Lookman Ndị nne na nna:
Ee, anyị maara na nne ya na nna ya buru ụzọ gbaghaa ụzọ chọrọ nwa ha nwoke ka ọ bụrụ ọka iwu ma ọ bụ onye na-akwụ ụgwọ. Anyị gwakwara banyere ha mgbe Lookman nwetara goolu mbụ ya na EPL na Everton.
Ọ dị ka ndị nne na nna ya gwara ya tupu egwuregwu ahụ, B NOTGH SC IWU Mgbe ọ gbara akara megide City. Ha gwara ya ka o mee nke ahụ mgbe ha ruru ụlọ - n'ihu ha. Lelee vidiyo ahụ.
Banyere ndị ikwu Ademola Lookman:
Dị ka Yannick Bolasie si kwuo, ndị ịgba ọsọ ndụ sitere na nzụlite siri ike na Peckem (London) ebe ọ siri ike ibi. Site na nyocha anyi, Ademola sikwa na ihe yiri ezigbo mgbọrọgwụ Naịjirịa.
Site na nnabata ndị nne na nna ya, ọ na-achọta oge iji gaa na ndịda ọdịda anyanwụ Nigeria, ebe nna ya na mama ya si.
N'ezie, Lookman nwere omume enyi. Ọ na-achọta oge iso ndị ikwu na ndị enyi ya na West Africa nwee mmekọrịta.
Obi dị m ụtọ ịhụ Ademola Lookman ka ya na ndị ikwu ya nọ na Naijiria.
Eziokwu Ademola Lookman:
N'akụkụ mmechi nke Akụkọ ndụ anyị, anyị ga-agwa gị eziokwu ndị ọzọ gbasara onye bụbu Evertonian. N’atufughi oge, ka anyị bido.
Eziokwu # 1 - Iji tụnyere Ademola Lookman's Fulham Salary na nke Nkezi Brit:
Mmebi ụgwọ ọnwa nke Fulham 2020
Kwa Afọ £ 2,604,000
kwa ọnwa £ 217,000
Kwa Izu £ 50,000
Kwa .bọchị £ 7,143
Kwa elekere £ 298
Kwa Nkeji £ 4.9
Kwa nke abụọ £ 0.08
Kemgbe ịlele ibe a, nke a bụ ihe Ademola Lookman akwụ ụgwọ na Fulham
You maara? Nwoke nọ na London (onye na-akpata k 38k kwa ọnwa) ga-achọ afọ 68 na ọnwa 6 iji mee Ademola Lookman ụgwọ ọnwa kwa afọ na Fulham.
Eziokwu nke 2: Egwuregwu :gha:
Ihe profaịlụ Ademola Lookman kwesịrị nkwalite, nke kwesịrị ịdị elu - ma n'ozuzu ya ma nwee ike nweta akara.
Ihe ọ na-enweghị n'ogologo, superstar na-eme ka ahụ ike ya, nguzozi ya, dribbling, na osooso. N'ime eziokwu niile, akara ngosi nke 82 na ikike nke 86 ga-adị mma.
Eziokwu nke 3: Ahụhụ:
Ademola Lookman enwetala akara egwuregwu na-egbukepụ egbukepụ n'oge ọrụ ya. Anyị nwere otu n'ime ntaramahụhụ ndị ahụ ebe ọ kachasị karịa onye na-eche nche. Ọ bụ ihe ọ na-agaghị echefu echefu.
Eziokwu nke 4: Ademola Lookman Okpukpe:
Ndị nne na nna aka ekpe zụlitere ya dị ka Onye Kraịst. Anyị ahụwo ya ka ọ na-eme akara obe mgbe ọ bụla ọ banyere n'ọhịa wee nwee goolu.
Ademola na-atụkwa mkpịsị aka ya na mbara igwe mgbe ọ tụrụ. Ihe ndekọ akụkọ ihe mere eme nke Instagram Bio bụkwa ihe atụ maka okwukwe ya.
Igosi iguzosi ike n'ọchịchọ nke inweta bọlbụ bọọlụ. Nke a na-akọwa onye Ademola Lookman - nwoke ọtụtụ maara dị ka onye na-arụsi ọrụ ike.
Biography nke aka ekpe na-akụziri anyị na ụzọ maka ihe ịga nke ọma bụ ime oke mkpebi siri ike.
Kemgbe ọ bụ nwata, ịghọ ndị ịgba egwu bọọlụ bụ nnukwu nrọ ya. Onweghi ihe n’egosi na ichoro ibu onye oka iwu ma o bukwanu ego dika nne na nna ya choro. Taa, ezinụlọ Lookman dị mpako ịmata nwoke ọ winger ghọrọ.
Daalụ maka ịnọnyere anyị na akụkọ ndụ nke otu n'ime ọla kacha mma kacha mma na England. N'ebe a na Lifebogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ n'ọrụ nke ịnapụta Akụkọ bọọlụ bekee.
Biko kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ị hụ ihe ọ bụla na-adịghị mma na Bio anyị nke aka ekpe. N'ikwu nke a, anyị ga-enwe obi ụtọ ma ọ bụrụ na ị nye anyị echiche gị banyere onye na-agbachitere ya na ngalaba nkọwa. N'ikpeazụ, maka nchịkọta ngwa ngwa nke Ademola Lookman si memoir, jiri anyị Wiki table.
Aha zuru ezu: Ademola Lookman Olajade Alade Aylola Lookman
Age: 23 afọ na ọnwa 11.
Ụbọchị ọmụmụ: Thbọchị 20 nke Ọktoba 1997
Ebe amụrụ onye: Obodo Wandsworth, London
Mgbọrọgwụ ezinụlọ: Nigeria
Ndị nne na nna ebe amụrụ: Nigeria
Ndị nne na nna: Nna (N / A), Mama (N / A)
Ụmụnne: Nwanne (N / A), Nwanne nwanyị (N / A)
elu: 5 ft 9 sentimita asatọ OR (1.74 m)
Education: St Thomas Onye Ozi Kọleji na Peckham.
Ọnọdụ egwuregwu: Aka ekpe ekpe